TOOBO CALAAMAD SWEET: SHARAXAADA KALA DUWAN, SIFOOYINKA, SAWIRADA - BEER CAGAARAN
Tamaandhada delicious "Mucjisada macaan": sharaxaadda kala duwan iyo siraha ah ee beerashada
Taageerayaasha yaanyada waaweyn oo dhadhan fiican leh waxay diyaar u yihiin inay soo saaraan wax-soosaarkooda dhexdhexaad ah, dhibaatooyinka xagga daryeelka iyo shucuurta kale.
Kuwa isku dayay miraha asalka ah ee nooc ka mid ah Miracle Miracle marnaba iskama siin doono iyaga. Dhalooyinka sare waxaa lagu beeray lagu koriyo oo lagu koriyo, iyo dalagga waxaa la goostay qeybtii labaad ee xagaaga.
Sharaxaad faahfaahsan ee kala duwan ayaa laga heli karaa maqaalkan. Iyo sidoo kale awood u yeeshaan inay bartaan dabeecadahooda, astaamaha beeraha iyo beeraha, iyo waxyaabo kale oo ah mashiinada beeraha.
Miraha Tacliimka Macaan: Tafaasiisha kala duwan
Magaca dugsiga Miracle Miracle
Sharaxaad guud Xilliga bartamihii xilli-fasal oo heer sare ah
Cunto dhexdhexaad ah 600-1000 garaam
Noocyo dhaadheer ilaa 6 kg oo baadiyaha ah
Sweet Miracle - kala duwanaansho heer sare ah oo dhexdhexaad ah.
Burburka waa mid aan qarsoodi lahayn, dheer, faafin, wuxuu u baahan yahay in la xoqo khasab.
In lagu koriyo, dhirta gaarey 1.8 m dhererka. Caleen waa cagaar madow, cad. Miro waxay ku bislaadaan yar yar oo ah 3 qaybood. Isugeynta celceliska duurka ayaa laga qaadi karaa ilaa 10 yaanyo aad u ballaadhan. Xajmiga ayaa si tartiib ah u socda, ugxan-yarihii ugu dambeeyey ayaa la sameeyaa dhammaadka xagaaga.
Miraha waa weyn, miisaankoodu yahay 600 g ilaa 1 kg. Wadnaha-qaabeeya ama isku-dhafan, oo aad u dheer. Midabka ee yaanyada bislaado waa mid casaan leh. Jidhku waa mid aad u yar, fareeshka, casiir leh.
Dhadhanka Tamaandhada waa delicious, hodan-macaan, muujin.. Caraf udgoon oo macaan leh. Macmacaanka sonkorta badani wuxuu ka dhigayaa noocyada kala duwan ee cuntada iyo cuntada ilmaha.
Waxaad barbardhigi kartaa miisaanka darajooyinka kala duwan jadwalka hoose:
Miracle Miracle 600-1000 garaam
Nastya 150-200 garaam
Valentine 80-90 garaam
Goobta beerta 15-20 garaam
Domes of Siberia 200-250 garaam
Frost 50-200 garaam
Blagovest F1 110-150 garaam
Octopus F1 150 garaam
Dubrava 60-105 garaam
Waxaan soo bandhignay waxyaabo badan oo faa'iido leh oo ku saabsan macluumaadka ku saabsan yaanyada sii kordhaya.
Akhri dhammaan wixii ku saabsan noocyada aan caddaalad ahayn iyo kuwa la go'aamiyo, iyo sidoo kale yaanyada u adkeysanaya cudurrada ugu badan ee habeenkii.
Asalka iyo Codsiga
Mucaawin kala duwan oo macaan ee bred by Ruush ah oo loogu talagalay dhulka ku xiran: koriyo filim ama koriyo. Duufaan diiran, waxaa suurtogal ah in la beero sariiro furan.
Miraha waa la keydiyaa, gaadiidka waa suurtogal.. Tamaandhada la ruxay si dhaqso ah u bislaado kuleylka heerkulka qolka.
Salad khudradeed, waxay yihiin kuwo aad u dhadhan fiican leh, ku habboon cunto kariska, suxuunta dhinaca, cuntooyinka, baradho la shiiday. Yaanyada bislaado waxay sameeyaan casiir macaan oo cajiib ah.
Sawirku wuxuu muujinayaa yaanyo Miracle:
dhadhanka sare ee miraha;
ilaalinta wanaagsan ee yaanyada la goostay;
Waxaa ka mid ah caqabadaha jira:
baahida loo qabo in la sameeyo;
baadiyaha dheer waxay u baahan tahay taageero adag;
dhalidda ma aha mid aad u sarreeya, ilaa 6 kg duurka, waxay ku xiran tahay xoogga dharka.
Isbarbardhig soosaarka dalagga wuxuu ku jiri karaa jadwalka hoose:
Miracle Miracle ilaa 6 kg oo baadiyaha ah
Gantaal 6.5 kg mitir labajibbaaran
Ra'iisul wasaaraha 6-9 kg halkii mitir labajibbaaran
Stolypin 8-9 kg halkii mitir labajibbaaran
Klusha 10-11 kg halkii mitir labajibbaaran
Qeybta madow 6 kg oo baadiyaha ah
Buian 9 kg oo baadiyaha ah
Seeds lagu beeray geedo dabayaaqadii March - horraantii Abriil. Cunto khafiif ah oo la adeegsaday oo isku dar ah ciidda beerta leh humus iyo ciid webiga. Qaar ka mid ah superfosphate, potash ama ash xaabada ayaa lagu dari karaa substrate.
Ka hor inta beero, miraha waxaa lagu qooyay kiciyaha kobaca.suurtagal ahaan in jeermis lagu xalliyo khafiifka casaanka ah ee kaneecada. Akhri wax badan oo ku saabsan daaweynta abuurka halkan. Beeridda waxaa lagu sameeyaa qoto dheer oo ku saabsan 2 cm, beeritaanka waxaa lagu buufiyaa biyo kulul iyo daboolay filim.
Wixii biqilka guul leh u baahan yahay heerkul ah 23-25 ​​digrii. Ka dib markii ay soo baxaan weelasha caleemaha dib loo dhigo iftiin dhalaalaya oo muddo gaaban loo beddelo koritaanka labiska.
Cabbitaanka dhexdhexaad ah sida dhoobada sare. Waa sahlan tahay in la isticmaalo buufin ama waraabinta biyaha.
Marka labada qaybood ee ugu horeeya ee caleemo runta ah ay ka soo baxaan geedo, waxay ku dheregtaa dheriyo kala duwan waxaana lagu quudin jiray bacriminta dareeraha ah ee adag. Caleemaha adkeeysan way adkaadeen, waxay keenaan hawada furan, marka hore dhowr saacadood, ka dibna maalinta oo dhan.
Qalabaynta meel joogto ah oo deganaansho ah ayaa la sameeyaa marka dhirta uu jiro 60 maalmood. Ciidda si taxadar leh loo daboolay iyo bacrimiyey leh qayb cusub oo humus. Laakiin hal digrii. M wuxuu hirgelin karaa wax aan ka badnayn 3 dhirta, dhirta dhaadheer waxay yareyneysaa dhalidda.
Isla markiiba ka dib markii la beero, duurka u dheer ayaa kuxirnaa dhufto ama trellis. Sida miro-khudradda, laamaha culus waxay sidoo kale u baahan yihiin in la xiro. Waraabinta dhirta waxaa lagula talinayaa sida ciidda u engegay, iyada oo diirimaad biyo diirran.
Xilliga, duurka waxay u baahan yihiin in ay ku quudiyaan bacriminta dhamaystiran ugu yaraan 3 jeer. Wixii soobaxa sare, dhirta foomka 2 ama 3 afkoda, ka saara caleemo dheeraad ah ka dib 4-5 burush.
Yaanyo kala duwan Mirate Sweet Miracle ma aha mid u nugul cudurka. Bisaylka hore wuxuu ka ilaaliyaa miraha laga bilaabo burburka cillada goor dambe, waraabinta saxda ah iyo hawo-siideynta waqtigeeda ah waxay ka caawisaa kahortaga caleemaha, cawska ama ubaxa.
Cayayaanka waxaa halis u noqon kara cayayaanka. Xilliga xagaaga, cayayaanka caarada caarada cayayaanka, iyo cayayaanka ayaa caawinaya in laga takhaluso. Waxay ku buufinayaan beerashada 2-3 jeer leh mudo ah 3 maalmood. Waxaad ka takhalusi kartaa aphids adigoo isticmaalaya saabuun diiran.
Tamaandho Miracle macaan - noocyo xiiso leh oo istaahila meel ah ee lagu koriyo. Qaar ka mid ah duurka ayaa siin doona ninkii beerta ka shaqaynayay oo leh dhadhan fiican leh iyo mid caafimaad leh; maaddooyinka abuurka xilliyada soo socda ayaa laga goosan karaa si madaxbannaan oo yaanyo u bislaaday.